रिया प’क्राउ परेपछि सुशान्तकी पुर्व प्रेमिका अंकिताले यस्ताे भनिन् …. पढ्नुहाेस – Sandesh Munch
रिया प’क्राउ परेपछि सुशान्तकी पुर्व प्रेमिका अंकिताले यस्ताे भनिन् …. पढ्नुहाेस
September 15, 2020 132
सुशान्त सिंह प्रकरणमा बलिउड अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीलाई ना’र्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो(एनसिबी)ले पक्राउ गरेको छ। रिया सुशान्तकी कथित प्रेमिका हुन्। सुशान्तको मृ’त्यु मा’मिलामा सबैभन्दा बढी रिया सं’काको घे’राभित्र थिइन्। रियालाई मंगलबार अपराह्नतिर गि’रफ्तार गरिएको हो।
रियाको गि’रफ्तारीमा सुशान्तकी पूर्व प्रेमिका अंकिताले कस्तो प्रतिक्रिया दिइन् ? यो सबैको चासोको विषय हो। अंकिताले शुरूदेखि नै सुशान्तको निम्ति न्यायको ल’डाइँ ल’ड्दै आएकी छन्। रियाको गि’रफ्तारीपछि अंकिताले खुसी हुँदै सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखिन्, ` न्याय।हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ, त्यस्तै फल भोग्छौँ। यो सबै कर्मको फल हो।´
अंकितालाई शुरुआतदेखि नै फ्यानहरूले धेरै माया दिएका छन्। अंकिता हरेक अवस्थामा सुशान्तको परिवारका साथमा रहेकी छन्। अंकिताले सुशान्तका कैयौं सपनामध्यको एउटा सपना पूरा गर्न पहल गरेकी छन्। जुन हजारवटा बिरुवा लगाउने सपना हो। सुशान्तको सपनालाई आफ्नै सपना ठानेर पूरा गर्न अंकिता लागिपरेको सुशान्तका फ्यानहरूलाई निकै मन परेको छ।
Prevसलमान खानलाई अदालतमा पेश हुन आदेश…
Nextह्वात्तै बढ्यो प्याजको मुल्य
कैलालीमा क्वारेन्टिनबाट घर पठाइएका ५८ जनामा कोरोना पुष्टि